Adobe Photoshop for Mac Download (GRATIS)
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop ho an'ny Mac
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-09, Malagasy Blog
Ampidino ity Adobe Photoshop novolavolaina manokana ho an'ny Mac Version ity raha mila programa manolotra endri-javatra maro ho an'ny fanitsiana sy fanitsiana sary ao amin'ny MacBook ianao. Ny fahafaha-mamokatra sary tsy manam-petra ary saika tsy misy fahaverezan'ny kalitao no mahatonga ity programa ity ho manokana ary mampiavaka azy amin'ny rindrambaiko fanovana sary ho an'ny Mac am-polony hafa.
DOWNLOAD PHOTOSHOP HO AN'NY MAC
Panel fanaraha-maso mora. Izy io dia manome ny fidirana amin'ny baiko sakafo lehibe sy ny fitantanana ny interface. Ahitana ny fitaovana rehetra azo ampiasaina hanitsiana sary ny bara fitaovana. Ny tontonana paramètre dia mampiseho izay fitaovana nofantenana ho ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ny faritra palette dia ahitana ny fitaovana rehetra hanodinana ny sary.
Miasa miaraka amin'ny sosona. Layers palette ao amin'ny Photoshop Mac Version dia ahafahan'ny mpampiasa manao sary na mamolavola faritra samihafa amin'ny canvas amin'ny sosona ary mametraka ny sosona amin'ny filaharana manokana. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka mitantana ny singa tsirairay amin'ny tsindry totozy. Na dia manao fahadisoana aza ianao dia tsy ho hita afa-tsy amin'ity faritry ny lamba ity izany mba hahafahanao manamboatra azy, ka tsy ho voakitika ny faritra hafa rehetra amin'ny lamba. Ny teknika fandokoana mahazatra dia tsy manana an'io endri-javatra mahafinaritra io.
Fanohanana endrika maro sy modely loko. Amin'izao fotoana izao, ny Photoshop amin'ny Mac dia manohana ny ankamaroan'ny endrika bitmap, toy ny JPEG, TIFF, BMP, PCX ary ny endrika sary vetaveta sasany (WMF). Raha ny endrika fototra amin'ny Photoshop, fisie PSD, dia mifanaraka amin'ny maimaim-poana Photoshop alternatives maro.
Ps dia manohana ireto modely loko manaraka ireto: RGB, LAB, Duotone, Multichannel, CMYK. Ankoatra izany, tsy ilaina ny mifamadika amin'ny mpanonta sary maimaim-poana.
Famandrihana Cloud Creative. Adobe Photoshop Mac dia ampahany amin'ny famandrihana Creative Cloud. Midika izany fa tsy maintsy mandoa ny programa isam-bolana ny mpampiasa. Ny mpamorona dia tsy manome fahafahana hividy ny programa indray mandeha sy ho an'ny rehetra.
Miasa amin'ny zavatra 3D. Ny fahaiza-mampifanaraka amin'ny teknolojia mivoatra tsy mitsaha-mitombo no mahatonga ny Photoshop CC ho vokatra ambony indrindra ho an'ny famolavolana sary ekena iraisam-pirenena. Ps 3D dia mampifaly ny mpampiasa amin'ny fahafahana manafatra zavatra 3D mivantana ao amin'ny Ps amin'ny alàlan'ny rindrambaiko rahona. Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia afaka manao sary mivantana eo amin'ny lamba amin'ny Ps. Ny filalaovana ny andian-tsary mifamatotra amin'ny zavatra 3D, ny fakana ny pose sy ny fisehon'ny tarehy amin'ny sarimiaina dia azo atao ihany koa.
Mamakia misimisy kokoa hahitana ny fomba hividianana Photoshop amin'ny fomba mora indrindra.
Fifandraisana amin'ny programa hafa. Tamin'ny voalohany, ny rindrambaiko Photoshop dia mpanonta sary bitmap. Ankehitriny dia manolotra fahafahana maro hiasa miaraka amin'ny sary bitmap sy vector. Na dia eo aza ny fahaiza-manaony, ny programa dia mifandray akaiky amin'ny fitaovana fanodinana sary hafa. Misy andiana vokatra iray manontolo – Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro. Ankoatra izany, ny Ps dia mifandray amin'ny programa avy amin'ny mpamorona hafa.
Betsaka ny fampianarana. Satria be dia be ny mpampiasa Ps izay manam-pahaizana amin'ny sehatra isan-karazany, toy ny fanamboarana sary, fampivoarana tranonkala ary famolavolana sary, dia te hizara ny fahalalany momba ny programa izy ireo. Izany no mahatonga ny Internet feno Tutorials amin'ny Photoshop, fampianarana, forum mavitrika ary bilaogy fanabeazana.
Photoshop ho an'ny Mac System Requirements
Processeur Multicore Intel processeur miaraka amin'ny fanohanana 64-bit
Rafitra fikirakirana macOS version 10.13 (High Sierra), macOS version 10.14 (Mojave), macOS version 10.15 (Catalina)
RAM 2 GB na mihoatra ny RAM (8 GB atolotra)
Karatra sary nVidia GeForce GTX 1050 na mitovy; nVidia GeForce GTX 1660 na Quadro T1000 dia tsara
Espace kapila mafy 4 GB na mihoatra ny toerana misy kapila mafy azo apetraka; mila toerana malalaka fanampiny mandritra ny fametrahana (tsy afaka mametraka amin'ny boky izay mampiasa rafitra fichier saro-pady)
DOWNLOAD HO AN'NY MAC
Na dia mbola tsy naka Adobe Photoshop ho an'ny Mac aza ianao dia diniho ny fepetra takian'ny rafitra fa ny solosainao dia mety ho malemy loatra ka tsy afaka mitantana azy. Jereo izy ireo mba hisorohana ny olana amin'ny fametrahana Ps sy ny fampiasana amin'ny ho avy.
Raha te hiasa amin'ny Photoshop ho an'ny Mac amin'ny fomba mahomby kokoa dia mila maka Hetsika Photoshop izay mikendry ny hampiditra vokatra isan-karazany amin'ny sary. Ity andiana hetsika Ps manokana ity dia mety amin'ny sary an-tsary ary hanampy anao hanatsara ny sary ao anatin'ny minitra vitsy.
Ampidino maimaim-poana ny Ps Actions Package
Na dia ampiasaina matetika aza ny fiantraikan'ny Exposure Indroa mba hanambatra sary an-tanety sy sary an-tsary, dia azonao atao ny manandrana karazana karazana hafa ary mijery izay karazana vokatra famoronana azonao atao!
Photoshop ho an'ny Mac download